Dambudziko nyowani nematikita eApple Watch nekuda kwechinangwa uye zvipo neApple Pay | Ndinobva mac
Dambudziko nyowani nematikita eApple Watch yezvinangwa zvekupa uye zvipo neApple Pay
Munguva pfupi yapfuura Apple yakatanga nematanho chaiwo kune vashandisi vane Apple Watch uye vanoda kuwana chakakosha kubudirira. Kwekupedzisira Kubvumbi, Apple yakatora chikamu zvakanyanya mukupemberera Zuva rePasi nekupa vashandisi vewatchwatch chinetso muChiitiko cheApple Watch ne chinetso chitsva chevashandisi.
Mune ino kesi isu tiri kutaura nezve dambudziko rakafanana iro rinonongedzera zvakananga kuNational Parks Foundation muUnited States, uye kuti semubairo ivo vanogashira imwe yeaya mabudiriro akakosha. Zvakare mune iyi kesi Apple zvakare ine chimwe chinhu chakagadzirirwa Apple Pay mukati memazuva gumi nemashanu ekutanga emwedzi waJuly.
1 Mipiro yekushandisa Apple Bhadhara
2 Kubudirira kutsva kuwana zvitambi paApple Watch
Mipiro yekushandisa Apple Bhadhara
Munguva yatakataura kubva muna Chikunguru 1 kusvika 15 yemwedzi mumwe chete, Apple ichapa dhora rimwe chete pane yega yekutenga yakaitwa nevashandisi vako chero paApple Store kana paapp.com. Zvese izvi pasina mushandisi kubhadhara chero chinhu, zviri pachena kuti Apple ichaita mupiro wezvakanakira.
Mukuru wekambani, VaTim Cook, vanoti zvinokurudzira kuva nePaki dzinoyevedza, uye nezviito izvi vanoda kutsigira zvirongwa zvekuchengetedza pamwe nekuvandudza zvirongwa zvevechidiki zvakagadzirirwa kukurudzira chizvarwa chinotevera cheNational Parks Foundation.
uye kuratidza iyo mazita avari kushandisa eiyo macOS inoshanda sisitimu kwenguva yakareba:
Mhando 10.10: "Yosemite"
Mhando 10.11: «El Capitan»
Shanduro 10.12: «Sierra»
Shanduro 10.13: "Yakakwira Sierra"
Kubudirira kutsva kuwana zvitambi paApple Watch
Mukuwedzera inotevera Chikunguru 15 uye chete iro zuva, Apple inopa vashandisi chinetso chePanyama chiitiko nematikiki ayo akakosha kuti vakwanise kuratidza mune yeMessage application. Mupfungwa iyi, ichave nguva yekufamba uye kune izvi iye anotsvaga kugadzira zvimwe 5,6 km kumhanya, wiricheya kana kufamba. Chitoro chekushandisa chichatariswawo kuNational Parks uye nekudaro mamwe maapplication akagadzirwa mune ino pfungwa anozoonekwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Dambudziko nyowani nematikita eApple Watch yezvinangwa zvekupa uye zvipo neApple Pay
Iyo Mad Max mutambo pahafu yemutengo paMac App Store